mishonga yemakwenzi Vagadziri vemhuka, Vatengesi - China mishonga yemakwenzi yeMhuka fekitori
Mvura yemvura inorapa Main zvinoriumba: Andrographis paniculata, poplar ruva, eucommia mashizha, oregano, persimmon peel, pomegranate peel, nezvimwe. Mabasa uye zvinoratidza: Broiler: Iyo ine mhedzisiro yakakosha kune inotevera nhanho yekubuda kwemvura uye kudyisa kudzika pasina kuwedzera, uye kushanda Kudzivirira kuzvimba kutatu. Rukoko: Iyo inoshandiswa kurapa salpingitis senge yolk peritonitis, mazai ejecha-goko, mazai anochengetwa neropa, mazai akapfava-goko, nezvimwe pakuisa huku. Usage: Broiler: 500ml mi ...
Ita Chiropa uye spleen
Prefect Chiropa uye chirwatata Main ingredients: Bacteria, Forsythia, Platycodon, Chuanmu Tong, Atractylodes, Bupleurum, Cohosh, Green Peel, Tangerine Peel, Eupatorium, Nepeta, Parsnip, Bengal, Angelica, Morning Glory, nezvimwewo Zvinoshanda ku: Inoshandiswa pachiropa che hepatosplenomegaly uye hemorrhage, kubuda ropa kwakasiyana matishu uye nhengo, kuwanda kweanus, kuderera kwekudya, kubhururuka kwemaziso, kunamira zvigaro, etc.Kushandisa uye Dosage: Kudzivirira: panguva yechirimo: 500ml sanganisa 250kg yekunwa mvura kupera mukati maawa mana, iwe ...
Gland gastritis kurapa
Gland gastritis inoporesa Main ingredients: Codonopsis pilosula, ginger yakaomeswa, licorice uye atractylode Properties: brown-yero mhinduro Zviratidzo: Avian inotapukira glandular gastritis, gizzard keratitis. Zviratidzo zveNecropsy: 1. Dumbu rakakurisa rehuku dzinorwara rakazvimba kunge globular uye chena mukaka, uye grey-chena grid-kunge chitarisiko kunogona kuonekwa mushure mekucherechedzwa kwakanyatso; Iyo incision inoratidza kuwedzera uye edema yeglandular mudumbu madziro, acupressure inogona kuyerera ichibuda serous fluid, s ...
Mhando dzakasiyana: Herbal Medicine Pharmacodynamic Influential Factors: Animal Species Packaging: 500g kana 1000g / bhegi kana 500ml kana 1000ml / bhodhoro kana OEM. Kubudirira: mabhodhoro 20000 uye mabhegi 20000 pazuva Nzvimbo Yekutangira: Hebei, China (Mainland) Chitupa: GMP ISO Port: TIANJIN Proventriculitis mushonga Kurongeka: aconite, fangfeng, pinellia, tangerine peel, poria, asarum, jujube, angelica, astragalus, licorice, ginger yakaoma. Chiratidzo: Mapoka ehuku ane kukura kwakashata uye budiriro, hombe uye ...
Kurapa kwekukosora Kuumbwa: Ephedra, Bitter Almond, Gypsum, Roasted Licorice Properties: yakasviba brown mvura Chiratidzo: Inoshandiswa kurapa kukosora uye zvituru zvakaoma zvinokonzerwa nezvirwere zvekufema, zvakanyanya uye zvisingaperi bronchitis Broiler 15-18days: Kana grey-brown necrotic maronda achioneka. mumapapu, chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa kuchenesa nzira yekufema kudzivirira tracheal embolism. Kushandisa uye kuyerwa: 500ml sanganisa 200L yekumwa mvura mukati memaawa mana kwemazuva 3-5 mazuva uchienderera.
Fever inopora Kurongeka: Ephedra, Bupleurum, Gypsum, Anemarrhena, Japonica Rice, Licorice, nezvimwewo Zvivakwa: yakasviba mvura yakasviba Chiratidzo: Inoshandiswa nefivhiri inokonzerwa nejekiseni rekudzivirira ma broiler uye zvidimbu. Fivha inokonzerwa nefuru uye chero zvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana. Kushandisa uye kuyerwa: 500ml sanganisa 150-250L yekumwa mvura kwemazuva 3-5 mazuva ese.
Chiropa chiropa uye itsvo
Prefect chiropa neitsvo chiratidzo: chiropa uye splenomegaly, kuora uye necrosis inokonzerwa ne vibrio hepatitis uye hutachiona hutachiona; chiropa uye itsvo kukuvara kunokonzerwa neakakomba chiropa chirwere, kudyisa kwekudya, chepfu yezvinodhaka, nezvimwewo; Ichi chigadzirwa chinoiswa kamwechete kumabroiler pazera remazuva gumi nematanhatu, izvo zviri pachena kuti zvinogona kudzivirira kuitika kwechimbichimbi kufa chirwere uye kudzora kufa mune inotevera nguva. Mune inotevera nhanho yekurapa chirwere, ichi chigadzirwa chinoshandiswa kugadzirisa chakakanganiswa chiropa a ...
AKL mushonga Kuronga: Codonopsis, Astragalus, Licorice, Aconite, Ginger Yakaomeswa, Cornus, Plantain, Gentian, Yinchen, Bupleurum, Gardenia, Salvia, Rhubarb, Angelica, White Peony. Iko kufungidzira kweAnkara pakutanga kwainzi "Kubatanidzwa Muviri Hepatitis", asi yakazodaidzwa kunzi "Ankara Chirwere" nekuda kwekuputika muAnkara, Pakistan. Iyo inoratidzirwa nekuwedzera kamwe kamwe kufa kwehuku, kurwara kwakanyanya, jaundice, chakawedzera chiropa, spleen, uye itsvo, hemorrhage uye ne ...
IBD / IB / ND kurapa
IBD / IB / ND kurapa Kuumbwa: Forsythia, honeysuckle, scutellaria, mashizha echando emubheri, maamondi anorwadza, chrysanthemum, epiphyllum, plantain, silika, angelica, yam, hawthorn, rwiyo rweumwari, chimera, bhari, gardenia, gentian, kudzu mudzi, Licorice , Bupleurum, nezvimwewo. Chiratidzo: Broiler ane mazuva 25-32 ekuberekwa, aine zviratidzo zvemakiriniki senge chikosoro, fivha, kurutsa, anorexia, chiropa uye kuwedzera kweitsvo. Kuisa huku kune zviratidzo zvakaita sekuderera kweyakagadzirwa mazai, chikosoro, fivha, chena ganda remazai, yello ...
Mushonga weAIV / mushonga weFlu
Mhando dzakasiyana: Herbal Medicine Pharmacodynamic Influential Factors: Animal Species Packaging: 500g kana 1000g / bhegi kana 500ml kana 1000ml / bhodhoro kana OEM. Kubudirira: mabhodhoro 20000 uye mabhegi 20000 pazuva Nzvimbo Yekutangira: Hebei, China (Mainland) Chitupa: GMP ISO Port: TIANJIN AIV kurapa （Flu kurapa) kuumbwa: yakasimba silkworm, yakazara scorpion, centipede, chura crisp, coptis, angelica, forsythia, borneol, gypsum, gardenia, houttuynia, nezvimwewo chiratidzo: 1) Inoshandiswa pakurapa isingabatike ...
Kutonhora kupora Kurongeka: ginger, aconite, yakakangwa licorice, astragalus, mupunga waini, epimedium Zviratidzo: kukurudzira kudya kwekudya, kunatsiridza kufanana, kugadzirisa kusagadzikana; bvisa kudzvinyirira immune. Chipimo chemushonga: 1) Chick: 1-7 mazuva, 0.2ml / pc. Kurudzira kunwa kwe yolk uye mhanyisa kukura kwezvirwere zvemuviri. Wedzera huremu hwemazuva manomwe ekukura kwemuviri uye nekuvandudza kufanana. 2) Mazuva makumi matanhatu kutamisa / kuwedzera boka 0.5ml / pc. 3) 1ml / pc mushure mekunetseka kwekutonhora. (Mishonga iriko mushure mekutonhora) 4) Mushure mekushandisa o ...
Rhinitis mushonga Kurongeka: Xin Yi, jongwe, platycodon, almond, plantain, angelica Chiratidzo: chikosoro, dyspnea, yakajeka, mutete wemhino yemhino kubva mudumbu remhino kutanga, mushure memazuva maviri, iyo mvura yemhino inoshanduka kuita viscous yero, mhino mhango uye mhino mucosa zvakazara uye kuzvimba, uye kumeso kuzvimba. Usage uye chipimo chemushonga: 500-800 huku hombe dzinorapwa ne500ml uye dzinoshandiswa mukati memaawa mana ekusungirwa. Chengetedzo: 1) Ichi chigadzirwa chinongoshandiswa chete pakurapa l ...